Yikuphi Ukuphela Komugqa Wokuthengisa? | Martech Zone
Yikuphi Ukuphela Komugqa Wokuthengisa?
NgoMsombuluko, Januwari 16, 2012 NgeSonto, Agasti 19, 2012 Douglas Karr
Amasu wokumaketha avame ukuklanywa ukuthola Okuningi ihola noma ithengise amakhasimende wamanje. Enye yezinkinga esivame ukuzithola namakhasimende ukuthi zihlala zisebenza ekugcineni okungalungile komugqa wokuthengisa. Izinkampani eziningi zithola izivakashi ezingaphansi ngenyanga kwiwebhusayithi yazo kunalokho ebingathanda… kepha uma bekwazi ukuguqula kabili kunezivakashi abanazo, bazophumelela kakhulu.
Ubuchwepheshe obuningi esisebenza nabo bakhelwe ukunciphisa isikhathi esidingekayo ukuguqula izethameli ezihlosiwe noma ukwandisa izinga lokuguqulwa endaweni ngayinye lapho i-funnel ivuza khona. Ngimangele njalo ukuthi sikubiza ngofanele… empeleni kuyi-colander enamathuba amahle avuzayo kuyo yonke indawo. Esikhundleni sokusebenza ngaphezulu kukalamu bese ushayela ngaphezulu kuholela kufelethi egcwele izimbobo, ungabusebenzisa kuphi ubuchwepheshe phansi kwalofanele?
Nabu obunye ubuchwepheshe… kufaka phakathi amanye amaklayenti ethu nabaxhasi abasizayo:
Abaphathi beWebhu amathuluzi ahlinzeka ngolwazi olubucayi ukukusiza ukukhuphula amazinga wokuchofoza ezinjini zokusesha. Usuvele unake ukuthi kungakanani ukusesha kwe-traffic okuletha kusayithi lakho, kepha uyazi ukuthi izinga lokuchofoza elikuliphi izinga lakho lamanje? Kungathuthukiswa?
Izifinyezo ze-URL njengeBit.ly ingakunikeza ngemininingwane oyidingayo ukuze ubone ukuthi amasu akho ezokuxhumana asebenza kanjani. Ubuwazi ukuthi i-Facebook ihlunga okufakiwe abantu abakubonayo besebenzisa i- Edgerank i-algorithm… futhi kungaholela kokuncane noma okulinganayo none ngemizamo yakho yokuxhumana nomphakathi empeleni ekhonjiswayo?
Izinkampani ezenzekelayo zokumaketha njenge-Right On Interactive bakha ubuchwepheshe obufushanisa umjikelezo futhi banikeze izindlela ezikusiza ukuthi uthole amaphuzu akho ukuze ukwazi ukuxhumana nabo ngempumelelo kunoku i-batch nokuqhuma izindlela ezingashayela zikhipha ifanele.
Izinkampani zokumaketha nge-imeyili NjengoDelivra inikela ngezinsizakalo ze-imeyili nezamaSMS ezingakhuphula kakhulu amazinga okuphendula futhi zifundise amakhasimende amanje ukuthi imikhiqizo noma imboni yabo - igunya lokwakha, ukugcinwa kanye namathuba okuthola ngokuhola.
Amapulatifomu Wokuhlola Oku-inthanethi njengeSurveyMonkey (othenge iklayenti lethu, iZoomerang) ingakunikeza ubuhlakani obudingekayo ukuze uthuthukise kakhulu amasu akho wokumaketha okuqukethwe. Ngokwenza ngcono okuqukethwe kwakho, uyakwazi ukukhomba ngokuthembekile imikhombandlela yokutholwa futhi uqinisekise ukuthi amakhasimende akho asekelwa kahle.
Isiphakamiso seSoftware izinhlelo zokusebenza ezinjengeTinderbox zikuvumela ukuthi uhlelanise futhi uthuthukise inqubo yakho yokuphakamisa. Ngokulandela izimpendulo zakho nokuqonda ukuthi ungazithuthukisa kanjani iziphakamiso zakho, uyakwazi ukushayela ukuguqulwa kusheshe futhi kube nempumelelo… konke ngenkathi usebenzisa izinsizakusebenza zangaphakathi ezimbalwa.
Njengoba ubheka i-Sales Funnel yakho, akuphi amasu akho ukuvuza? Esikhundleni sokuzama ukushayela izithameli eziningi, kunethuba elihle lokuthi awusebenzisi amakhasimende namathemba osuvele unawo. Kuyafaneleka ukubheka!
Tags: delivraimeyili Marketingukuzenzekelayo kokuzenzekelayongqo ekuhlanganyeleniukuthengiswa kwemfucuzaisiphakamiso sokuthengisatinderbox
Douglas Karr Monday, January 16, 2012 Sunday, August 19, 2012
Ukuhlolwa Kwesiphequluli Esiphambanweni Kwenziwe Kulula
Umlando Wezobuchwepheshe Obuphazamisayo Ekumaketheni
Jan 17, 2012 ku-2: 47 AM
Lokhu kuyiqiniso impela uDouglas. Futhi into ephambili ukuthi ngikujabulele ukufunda i-athikili yakho kakhulu. ukushayela izithameli eziningi, kunethuba elihle lokuthi awusebenzisi amakhasimende namathemba osuvele unawo. Into eyodwa engiyifundile ngaphambi kokuba ngibe ngumbhali othengisa kakhulu futhi kudala ngaphambi kokuthi i-Inc Magazine ivote inkampani yami njengenye yezinkampani ezikhula ngokushesha kakhulu ukuthi ngokusebenzisa lobu buchwepheshe umuntu angazuza izethameli eziningi ngokwengeziwe kwiwebhusayithi yakhe yokumaketha online.
Jan 17, 2012 ku-3: 05 AM
Ngiyabonga kakhulu ngamazwi akho anomusa, @DanielMilstein: disqus! Futhi cabanga nje ukuthi ubungaphansi kangakanani umsindo obengaba khona lapho uma sigxila ekuphenduleni imikhondo ebesinayo esikhundleni sokuthela ogaxekile abaningi kakhulu laphaya.